Dastabej » गाभरमा बाघसंग किन हुन्छ दैनिक जम्काभेट ?
गाभरमा बाघसंग किन हुन्छ दैनिक जम्काभेट ? – Dastabej
गाभरमा बाघसंग किन हुन्छ दैनिक जम्काभेट ?
नेपालगन्ज— करिव एक महिनाअघि बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर १ कुसुम गाभर मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघ देखिन थालेपछि निकुन्ज प्रशासनले क्यामेरा जडान गर्यो । त्यस क्षेत्रमा बाघको आउजाउ बढिरहेकाले वन प्रवेश नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर त्यसको केही दिनमै गाभर क्षेत्रमै सुस्त मनस्थितीका एक जनालाई झम्टेरा मारेको थियो । एक साताअघि गोठाला गएका गाभरका तीन महिला झण्डै बाघको आक्रमणमा परेका थिए । बाघले एक जनाको ज्यान लिएपछि त्यस क्षेत्रमा परिचालन गरिएको हात्ती र निकुन्जका कर्मचारीका कारण महिलाहरुको ज्यान जोगिएको हो । ‘बाघ देखिन थालेदेखि नै वन क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै आएका छौँ । एक जनाको ज्यान गैसक्दा पनि वनभित्रै मान्छे प्रवेश गरिरहेका छन्,’ बाँके निकुन्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम शाह भन्छन्,‘अस्तिकै घटना हेर्नुस हात्तीमा चढेका हाम्रा कर्मचारीले बाघ नदेखेको भए जे पनि हुनसक्थ्यो ।
धन्न टाढै रहेको बाघ देखेर गोठालाहरुलाई रुख चढ्नुस भनियो ।’ उनका अनुसार बाघको बासस्थानमा मानिसहरुको प्रवेश रोक्ने हो भने बाघले आक्रमण गर्दैन । उनले बाँके निकुन्जमा बाघको संख्या पहिले भन्दा अझै बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिने बताए । सन् २०१८ को गणना गर्दा बाँके निकुन्जमा हालसम्म २१ वटा ब्यस्क पाटे बाघ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बाघ गणना गर्ने कार्यक्रम छ ।
बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज क्षेत्र र मध्यवर्ती वनले घेरिएको गाभरगाउँका स्थानीयहरुमा एक महिनादेखि बाघको त्रास छ । निकुन्जमा बाघको संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ । जसका कारण त्यस क्षेत्रमा दैनिक दुई वटा बयस्क बाघ देखिने गरेका छन् । तर, निकुन्ज अधिकारीहरुका अनुसार बाघको संख्या बढ्दैमा मानव बस्तीलाई खतरा नहुने बताउँछन् । ‘बाघको संख्या बढ्दैमा स्थानीयहरु त्रसित हुने कुनै कारण नै छैन । यो वर्ष बाघले जति पनि घटना घटाएको छ, त्यो सबै वन क्षेत्रमा पर्छ,’ बाँके राष्ट्रिय निकुन्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श् शाह भन्छन्,‘बाघले मान्छेलाई आक्रमण गरेको घटनाको बिशलेषण गर्दा गाउँमा पसेर बाघले मान्छेमाथि आक्रमण गरेको देखिदैन । त्यसैले निकुन्ज र वन क्षेत्रका सर्वसाधारणहरुले वनमाथिको आफ्नो निर्भरता कम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
१० वर्ग स्क्वायर भन्दा कम क्षेत्रमा बाघ बस्दैन । एउटा बाघले २० देखि ४ सय हेक्टरसम्म आफ्नो अधार ईलाका बनाएर बस्न सक्छ । बाघको त्रास बढेपछि निकुन्ज प्रशासनले राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुसहित गाभरका स्थानीयहरुसंग छलफल गरेको छ । छलफलकै क्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दियाका प्रमुख तथा बन्यजन्तु बिज्ञ डा.रबीन कडरीयाले यो वर्ष बाघले २४ घटना घटाएको बताए । तर ति सबै घटनाहरु वन क्षेत्रमै भएको बताए । ‘बाघले आक्रमण गरेको सबै घटनाको अध्ययन गर्दा हिडिरहेको मान्छेलाई बाघले आक्रमण गरेकै छैन । गाउँमा पनि पसेको छैन,’ उनले भने,‘बाघको बासस्थानमा गएर घा“स काट्ने क्रममा आक्रमण भएको देखिन्छ ।’ उनले निकुन्ज र वन क्षेत्रमा नगए बाघको आक्रमण नहुने सुझाए ।
डिभिजन वन कार्यालयका बाँकेका सहायक संरक्षण अधिकृत गणेबहादुर खडकाले बाघले आक्रमण गरेको क्षेत्र निकुन्जको रहेको बताए । उनले बाघको संख्या बढेसंगै मध्यवर्र्ती क्षेत्रमा पनि देखिने गरेको सूचना आउने गरेको जनाए । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख लाहुराम चौधरीले बाघबाट जोगिन वन क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न अनुरोध गरे । उनले सुरक्षित बस्तीका लागि सम्बन्धित निकायहरुसंग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर स्थानीय चन्दा लामाले भने गाईबस्तु पाल्नका लागि चरीचरन गर्न वन क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिन । उनले बाघका कारण बस्ती नै आतंकित भएको जनाईन । रातिका समयमा पनि बाघ आउँदा त्रास बढेको उनको गुनासो छ ।
बाँके निकुन्ज र भारतको सुहेलवा सेन्चुरी करिडोर
पुर्बी गाभर क्षेत्र बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतको सुहेलवा सेन्चुरी जोड्ने कम्दि जैविक मार्ग हो । बक्र रेखा झै फैलिएको उक्त जैविक मार्गबाट बाघ लगायतका बन्जजन्तु ओहोरदोहोर गर्छन । त्यसैले गाभर क्षेत्रमा बाघ लगायतका बन्यजन्तुहरु बढी देखिने गरेको निकुन्जले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा हालसालै आमाबाट छुटिएका दुई वटा बाघ देखिने गरेका हुन । ति बाघ करिव दुई÷अढाई वर्षका छन् । उनीहरु भर्खरै आमाबाट छुटिएकाले आफैले शिकार गर्न सिक्ने अवस्थाका छन् ।
गाभर क्षेत्रमा करिव पाँच दर्जन घर छ । उत्तर तर्फ राजमार्गसंगै जोडिएको बा“के राष्ट्रिय निकुन्ज छ । दक्षिण तर्फ सामुदायिक वन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको उक्त गाउँ निकुन्ज लागु गरेपछि असुरक्षित बनेको हो । बस्तीमा सहजै बन्यजन्तु पस्ने गरेका छन् । निकुन्ज र सामुदायिक वनको बिचमा रहेको उक्त गाउँमा बाघले आक्रमण गरेपछि त्रास फैलिएको छ । उक्त बस्तीलाई यसअघि निकुन्ज प्रशासनले त्यहाँबाट स्थान्तरण गर्ने पहल थालिएको थियो । राप्ती नदीमा घडियाल गोही संरक्षण गर्न उक्त बस्ती हटाउन पर्ने भन्दै स्थान्तरणको प्रयास भएको हो ।
बाँके निकुन्ज मुलुककै कान्छो
साढे ५ सय बर्ग किलो मिटरमा फैलिएको मुलुकको सबैभन्दा कान्छो बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज हो ।०६७ बैशाख ३० गते सरकारले निकुञ्ज घोषणा गरी असार २८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको हो । निकुञ्ज संरक्षणका लागि नेपाली सेनाको सुरक्षा पोष्ट राखिएका छन् । मुलुक कै सबैभन्दा कान्छो निकुन्जमा बाघसंगै ११ प्रजातीका दुर्लभ तथा संकटमा परेका स्तनधारी रहेका भेटिएका छन् ।
२३ आश्विन २०७८, शनिबार १०:०९ प्रकाशित